Misy ve ny Fomba Fiarovana Aminao? & Ndash; Ny Semalt no manome ny valiny
Misy ve ny Fomba Fiarovana Aminao? - Ny Semalt no manome ny valiny
Ny Internet dia feno karazan'olona rehetra. Maro ny olona ao amin'ny aterinetodia mandany alina tsy misy torimaso manandrana manatanteraka karazana hosoka amin'ny aterineto manokana. Misy karazana hosoka amin'ny aterineto maro. Ny ankamaroan'nyNy olana momba ny fiarovana an-tserasera dia avy amin'ny asan'ny hackers, spammers, ary ireo olon-kafa mpanao heloka bevava hafa. Ny tranokala e-commerce dia mitoetra aony tànan'ny tranonkala admin.
Ireto ambany ireto ny toro-hevitra omen'i Alexander Peresunko, ny Semalt Customer Success Manager, izay hanampy anao hitazona ny hosoka amin'ny aterineto - objetivo digital en camara analogical.
1. Mianara hamantatra ny fanandramana fisintonana phishing sy spear.
Ny fanafihan'ny phishingdia lasibatra hanandrana sy hahazo fampahalalana fanampiny avy amin'ny olona iray satria ny kaonty amin'ny aterineto miaraka amin'ny fikambanana iray hafa dia nokapohina namijaly noho ny fandavana ny angon-drakitra. Ireo fanafihana ireo dia manainga olona iray mba hanome fampahalalana manokana amin'ny alalan'ny fampanantenana sandoka. Tokony hisy olona iraydia manome ny fampahalalana kely indrindra momba ny tenany amin'ny orinasa na orinasa raha tsy afaka manazava ny antony ilana azy ny orinasa.Amin'ny ankapobeny, ny orinasa legioma dia afaka manazava sy mamaly ny fanontaniana rehetra araka ny tokony ho izy.
2. Ampiasao ireo tenimiafina matanjaka sy azo antoka.
Mampiasa tenimiafina matanjaka izay mampifandray ny taratasy,Ireo karazana manokana, kapila ary tarehimarika dia fomba iray hiarovana ny tenanao amin'ny hosoka amin'ny aterineto. Na izany aza, mihoatra ny tenimiafina matanjaka, mampiasaNy tenimiafina mitovy amin'ny tranonkala maro dia mampihomehy ny fiarovana ny kaontinao. LastPass sy KeePass dia sasantsasany amin'ireo asa fanampianairay hamoronana, hitazona sy hitantana ny tenimiafina matanjaka maro ho an'ireo toerana rehetra izay mitsidika an-tserasera.
3. Mitandrema amin'ny mailaka sy fangalana ahiahiana.
Tsy tokony hanokatra mailaka ny olona irayna fanaka avy amin'ny loharano tsy misaina. Tokony hokarohina na dia amin'ny mailaka aza ny fisoratana sy ny fanitarana ny tranokala azo itokisanaalohan'ny hamoahana na fanokafana azy ireo, indrindra fa ny mailaka ofisialin'ny masoivoho avy amin'ny banky na ny sendikan'ny banky mangataka anao hampiditra sy handinikany antsipirian'ny kaontinao. Ny ankamaroan'ireo orinasa dia tsy manisy mailaka olona iray ary mangataka azy ireo hanamarina ny fampahalalana momba ny kaontiny. Ary na rahoviana azaAra-dalàna izany, mahasalama ny mitsidika ny tranokalan'ny orinasa na miantso ny orinasa fa tsy mikitika ny rohy nomena ao amin'ny mailaka.
4. Aza misalasala, mitandrina ary mitandrina.
Raha misy olona mangataka anao amin'ny fampahalalana anao sy izanytsy mahatsiaro tena, tsy manao izany raha tsy takatrao ny antony ilàn'ny olona ilay vaovao. Matokia ny toe-tsainao anatiny. Mianara koaho fampiroboroboana fahatsiarovan-tena faharoa ary manolotra anao amin'ny aterineto. Jereo ny loharanony. Matetika ny ankamaroan'ireo hafatra ireo dia hanana teny hoe "scam".Manàna fotoana hamakiana ny toro-làlana federaly momba ny fiarovana amin'ny fangalarana ny maha-olona sy ny toro-làlana federalyho fisorohana ny hosoka amin'ny Internet ao amin'ny USA.gov. Raha efa nangalatra ny maha-izy anao, tatitra momba ny fangalarana ny maha-izy azy.
5. Ampiasao ny HTTPS na aiza na aiza.
Ny olona tsirairay no miantoka ny fifandraisana amin'ireo tranonkala,Ny fitsidihany amin'ny SSL no fomba azo antoka indrindra hahazoana toky fa ny iray dia miresaka amin'ny tranonkala legit ary koa hahazoana antoka ny fifandraisana amin'ny tranonkaladia voahodina noho izany ny fiarovana anao amin'ny hosoka amin'ny aterineto.
6. Tohizo ny rindrambaiko manohitra ny malware.
Na izany aza, dia virosy sy tranaonatsy olana mahazatra ankehitriny; Mila mametraka rindrambaiko manohitra ny malware eo amin'ny milina misy azy. Ataovy azo antoka ihany koa fa ny antibiotika dia mihazonahatramin'izao. Ny tsy fisian'ny antivirus dia tsy ilaina.